एजेन्सी, आजकल सोशल मीडियामा जसको धेरै फलोअर्स हुन्छ, उनीहरु अरुको माझ छुट्टै दृष्टिकोणमा रहने गर्दछन् । त्यस्तै पछिल्लो समय सोशल मीडियामा लाखौ फलोअर्स बढाउने ट्रेन्ड चलेको छ । सामाजिक संजाल मध्ये इन्स्टाग्राम चलाउनेहरु पनि धेरै रहेका छन् । यहाँ कसैको थोरै फलोअर्स हुन्छ भने कसैको लाखौ हुने गर्दछन् । तपाई पनि आफ्नो अधिक फलोअर्स होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यी ५ अटोमेटिक टूल्सको प्रयोग गर्नुहोस।
१. सोसलड्रीफ्ट (SocialDrift): इन्स्टाग्राममा फलोअर्स बढाउनको लागि सोसलड्रीफ्ट भन्दा राम्रो अरु कुनै अटोमेटिक टूल रहेको छैन । यसमा एक स्टाइलिश ड्यासबोर्ड छ जसमा तपाईको फलोअर्स कहिले र कति बढे भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ । यसको लागि तपाई socialdrift.com मा गएर लागिन गर्न सक्नुहुन्छ ।
२. भाइरल अपग्रेड (ViralUpgrade): यस टूलको मद्दतले तपाई आफ्नो टारगेट यूजर्सलाई आफ्नो फलोअर्स बनाउन सक्नुहुनेछ । यो टूल तापाईको प्रोफाइलको हिसाबले यूजर्सको लिस्ट देखाउने गर्दछ ।
३. कोम्बिन (Combin): यसको सबैभन्दा धेरै प्रयोग मार्केटिंग र इंडस्ट्रीले प्रयोग गर्ने गर्दछन् । यस मार्फत तपाई ह्यासट्याग, लोकेशन र सर्चको आधारमा आफ्नो फलोअर्स बढाउन सक्नुहुन्छ । यसको लागि Combin.com मा जानु पर्दछ । यसको ड्यासबोर्ड यूजर फ्रेन्डली रहेको छ ।
४. इन्स्टाहिप (Instaheap): यो साइट पनि तपाइको लोकेशन, सर्च र ह्यासट्यागको आधारमा तपाईलाई फलोअर्सको लिस्ट देखाउने गर्दछ । यसपछि तपाई उनीहरुलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ । त्यसपछि उनीहरुले तपाइलाई फलो ब्याक गर्नेछन् ।
५. सोसअली रिच (Socially Rich): यो साइटको दावा रहेको छ कि यसको मद्दतले तपाइलाई कम से कम १,००० निश्चित रुपमा प्राप्त हुनेछ नत्र भने पुरै पैसा फिर्ता हुनेछ । वास्तवमा Socially Rich साइटले इन्स्टाग्राम फलोअर्स बढाउनको लागि पैसा लिने गर्दछ । यस साइटको भने तपाई ३ दिन फ्री ट्रायल गर्न सक्नुहुनेछ ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, पुष १८, २०७४१२:०९